Nidaamka waxbarashada ee Swiidhishka waxaa ku jira qaabab dugsiyo oo waajib ah iyo kuwa iskaa iyo haddii aad doontid ah labadaba. Dugsi hoose-dhexe waa sagaal sanadood, waana ku khasab ardayda laga billaabo 7 jir.
Ardayda u baahan dugsi kale oo hoose-dhexe waxaa jira dugsi hoose-dhexe oo loogu tala galay carruurta maskax ahaan dhimman iyo dugsi gaar ah. Qabaabka dugsiyada ee iskaa iyo haddii aad doontid ah waa dugsiga xannaanada iyo barbaarinta carruurta iyo fasalka dugsiga xannaanada iyo barbaarinta carruurta ee loogu tala galay carruurta yar-yar. Ardayda laga billaabo 16 jir waxaa jira dugsi sare iyo nuucyo kala duwan oo waxbarashada dadka waaweyn ah.
Dugsiyada Swiidhishka badankoodu waa dugsiyo guud, waxaana gacanta ku haya degmooyinka, laakiin waxaa sidoo kale jira tiro dugsiyo xur ah oo soo kordhaya. Jaamacadaha badankoodu waa hey'ado guud. Jaamacaduhu waa ay madax bannaanyihiin oo cidna kuma xirna.
Muuqaal ka weyn xagga nidaamka waxbarashada ee Swiidhishka
Barta intarneedka ee Hey'adda dugsiyada ka sii akhriso wax badan
Sharciga dugsiyada ayaa aasaas u ah waxbarasho kasta
Sharciga dugsiyadu waa kan aasaaska u ah waxbarasho kasta, laga billaabo dugsiga xannaanada iyo barbaarinta carruurta ilaa dugsi sare, iyo xaqqa waxbarashada loogu tala galay dadka waawyn. Sharciga dugsiyadu waxaa uu sugayaa in cid walba ay fursad u hesho waxbarasho iyadoo aan la eegeynin jinsi, ka tirsanaansho cid ahaaneed, meesha deegaanka ama waxyaabaha la xiriira dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada. Ardayda ay ku adagtahay in ay waxbarashadooda kasoo baxaan waxaa ay helayaan taageero gaar ah.
Baarlamaanka, xukuumadda iyo Hey'adda dugsiga ayaa mas'uul ka ah manhajka waxbarashada, qaraarrada, talooyinka guud iyo talaabooyinka qaran ee horuumarka si loo xaqiijiyo ulajeeddooyinka sharciga dugsiyada. Dhinaca kale ee xakameynta nidaamka waxbarashadu waa imtixaannada qaran, qiimeyn ku sameyn iyo kormeerid.
Mas'uuliyad heer qaran
Xukuumadda ayaa heer qaran mas'uul uga ah dugsiga, taas oo u dhaceysa ayadoo la sii maro hey'adaha dugsiyada mid kasta meesha uu mas'uul ka yahay.
Hey'adda koontaroosha dugsiyada ayaa leh mas'uuliyadda kormeeridda dugsiyada, waxbarashada dadka waaweyn, guriga xilliga firaaqada iyo hawlaha kale ee la xiriira habka waxbaridda.
Hey'adda dugsiyada ayaa xakameyneysa, daba gal ku sameyneysa, qiimeyneysana cidda dugsiga, dugsiyada xannaanada iyo barbaarinta carruurta iyo hawlaha dugsiyada mas'uulka ka ah iyadoo ulajeeddadu tahay in la hagaajiyo tayada iyo natiijada.
Hey'adda dugsiyada ee habka waxbaridda gaarka ah waxaa ay dhammeystireysaa degmooyinka iyo dugsiyada kheyraadkooda u gaarka ah. Hey'addu waxaa ay taageero ku bixineysaa arrimaha khuseeya waxbarashada qofka, shaqada barayaasha ama hawlaha iyo ururka. Hey'addu waxaa ay sidoo kale gacanta ku haysaa dugsiyo gaar ah oo loogu tala galay naafada qaarkood.